Kadib weerarki Otto Otto, Mareykanka oo digniin amni soo saarey
WASHINGTON - Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa uga digtay muwaadiniinta u dhashay dalkaasi iyo dalalka kale inay u safraan Soomaaliya, iyadoo sababta ugu wayn ku sheegtay nabad-gelyadda, oo aan la isku halleyn karin xilligan.
War qoraal ah oo lagu soo daabacay Bogga Internet-ka ee Wasaaradda ayaa lagu sheegay in falal dambiyeedyada sida afduubka iyo dilalka ay yihiin kuwa joogto uga dhaca Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan Puntland iyo Somaliland, oo jidgooyooyin sharci darro ah ay buux-dhaafiyeen.
"Kooxaha argagaxisada waxay wali sii wadaan inay maleegaan afduubka, qaraxyada iyo weerarada kale ee ay ka geysanayaan Soomaaliya, iyagoo bartilmaameedsanaya Garoomada diyaaradaha, Dekedaha, xaruumaha dowladda, Hoteellada, makhaayadaha, goobaha laga dukaameysto, iyo meelaha kale ee shacabka isagu yimaadaan, oo muwaadiniinta reer galbeedka joogteeyaan, sidoo kale kolonyada dowladda iyo kuwa ajnabiga," ayaa lagu yiri warbixinta digniinta safarka.
Kooxaha Burcad Badeeda ayaa la sheegay in meelaha ka baxsan Biyaha Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah wali ka jiraan, islamarkaana ay geysan karaan falal Afduub ah, si lamid ah kooxaha hubeysan.
Si gaar ah muwaadiniinta Mareykanka ee ku nool Soomaaliya ayaa lagula taliyay in aysan u safrin Soomaaliya, maadaama Mareykanka uu awoodin inuu u gurmado haddii ay dhibaato la kulmaan, iyadoo taasi lagu sababeeyay in maamulka Trump uusan Qunsul joogto ah oo u fadhiya Muqdisho.
Waa markii labaad oo Mareykanka uu digniin dhanka amaanka ah kasoo saaro xaaladda Soomaaliya, iyadoo ay kasii horeeyeen dalalka Imaraadka iyo Ingiriiska, oo dhankooda uga digay Muwaadiniintooda inay Soomaaliya usoo safraan.
Digniinahan isdaba jooga ah ayaa soo baxaya xilli Al Shabaab ay kordhisay weeraradeeda argagaxiso, iyadoo kii ugu dambeeyay ay ku qaadey xarunta Otta Otta, oo ay wada degan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga, taasi oo ku taalla meel amnigeeda si weyn loo sugo.
HOOS KA AKHRI WARQADDA DIGNIINTA:
Al-Shabaab oo beenisay inuu "geeryooday" hogaamiyaheeda
Soomaliya 27.06.2018. 13:22
Sarkaal katirsan ciidamada Militeriga Soomaaliya ayaa sheegay in hogaamiye Axmed Diiriye...